May | 2013 | San Oo Aung's Weblog
လူကြီးမင်း လက်ရှိနေထိုင်နေသော တိုင်းပြည်ရဲ့ အမည်ကို ရွေးချယ်ပါ။ (ဥပမာ- Myanmar)
We humbly and strongly request you to recommend for sending United Nation peacekeeping forces into Burma to protect our lives.
မရှင်းလင်းပါက ပုံတွင်လည်း ဖော်ပြပေးထားပါကြောင်း။
မြန်မာမွတ်စလင်မ်လူထုတစ်ရပ်လုံး စစ်အာဏာရှင်များနဲ့ ၎င်းတို့ရဲ့ အလိုတော်ရိလက်ပါးစေ ၉၆၉ အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်ဝါဒီများရဲ့ အကြမ်းဖက်ခြင်း အမျိုးမျိုးမှ ကင်းဝေးကြပါစေ
Free Rohingya Campaign and Myanmar Muslim Civil Right Movement
By THOMAS FULLER Published: May 29, 2013
BANGKOK — Security forces on Wednesday struggled to bring peace toanorthern city in Myanmar after Buddhist mobs set fire toamosque,aMuslim school and shops, the latest outbreak of religious violence in Myanmar andasign that radical strains of Buddhism may be spreading toawider area of the country.
Aljazeera:Religious violence erupts in Myanmar
Posted on May 29, 2013 by tunaung
BBC:Sri Lanka Buddhist monk dies after self-immolation
Posted on May 27, 2013 by tunaung
A Buddhist monk who set himself alight as an act of protest has died of his injuries in Sri Lanka.
Bowatte Indarathana was protesting against the slaughter of cattle and the alleged conversion of Buddhists by the country’s minority faiths.
He set himself on fire on Saturday outside the country’s holiest shrine – the Temple of the Tooth in the central city of Kandy.
The government condemned media outlets showing shocking video of the incident.
VOA:မိတ္ထီလာအရေးအခင်း အစိုးရကိုင်တွယ်ပုံ ဒေါ်စု ဝေဖန်
Posted on May 22, 2013 by tunaung
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တရားရေးစနစ်ဟာ လွတ်လပ်မှု မရှိဘူး။ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းရဲ့ ချုပ်ကိုင်မှု အောက်မှာ ရှိနေတယ်လို့ မြန်မာ့ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ပြောသွားပါတယ်။ မိတ္ထီလာ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းမှာ အစိုးရရဲ့ ကိုင်တွယ်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က တနင်္လာနေ့က လွှတ်တော်ဆွေးနွေးပွဲမှာ အခုလို ပြောခဲ့တာပါ။ အပြည့်အစုံကိုတော့ မအေးသန္တာကျော် က တင်ပြထားပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟာ အင်္ဂါနေ့ကတော့ နေပြည်တော် လွှတ်တော် အစည်းအဝေးကို တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ မိတ္ထီလာမြို့မှာ မတ်လက ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့ မူဆလင်တွေကြား ဂိုဏ်းဂဏကွဲ တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြေညာခဲ့ရတာကို အဲ့ဒီလွှတ်တော် အစည်းအဝေးပွဲမှာ တရားဝင် ခွင့်ပြုပေးခဲ့တာပါ။
Reuters:Obama urges Myanmar to stop violence against Muslims
Posted on May 21, 2013 by tunaung